ပုံနှိပ်ဆားကစ်,printed wiring, printed board, printed circuit board (PCB), printed wiring board(PWB), rigid printed board, four layer board, rigid4layer printed board.4layer Blue 1.6mm board. - တရုတ် circuiပုံနှိပ်ဝါယာကြိုး�ပုံနှိပ်ဘုတ်အဖွဲ့�ပုံနှိပ်ဆားကစ်ဘုတ်prPCBed ပုံနှိပ်ဝါယာကြိုးဘုတ်အဖွဲ့iPWBoarတင်းကျပ်ပုံနှိပ်ဘုတ်အဖွဲ့riလေးအလွှာဘုတ်အဖွဲ့igiတောင့်တင်းသောnteအလွှာပုံနှိပ်ဘုတ်အဖွဲ့ boaအလွှာအပြာရောင် 1.6mm ဘုတ်အဖွဲ့nted board.4layer Blue 1.6mm board. ကုန်သွင်းသူ,စက်ရုံ -WMD
4 အလွှာ FR4 TG140 အပြာရောင်ဂဟေဆက်
195.8 x က 138 မီလီမီတာ / 2UP
အဝတ်အချည်းစည်းဘုတ်အဖွဲ့, ရှင်းလင်းသောဘုတ်အဖွဲ့, panel ကိုအရွယ်အစား: 195.8 x က 138 မီလီမီတာ / 2UP, ပြားအဖြစ်သင်္ဘော, 1.60မီလီမီတာ - 1 အောင်စ -4အလွှာ - FR4 140Tg, အပြာရောင်ဂဟေဆက် x ကိုတှနျးလှနျ 2, အဖြူရောင် Silkscreen က x 1, immersive နီကယ်ရွှေ Finish ကို, ရှင်းလင်းသောဘုတ်အဖွဲ့စမ်းသပ်ပြီး, ul မှတ်သားခြင်းနှင့်အတည်ပြု, ၏လမ်းကြောင်း panel ကအဖြစ်ထောက်ပံ့2ထောက်ပံ့ Gerber အဖြစ်ဆားကစ်. အလွှာရေတွက်ဖြစ်ပါသည် 4, IPC CLASS 2, နည်းပညာဆိုင်ရာ features တွေအပြာရောင်ဂဟေဆက်မျက်နှာဖုံးနှင့် immersive ရွှေ. လျင်မြန်စွာအလှည့်ရှေ့ပြေးပုံစံ, တစ်ချိန်ကစမ်းသပ်ပြီး, မြင့်မားသော Volume ကိုထုတ်လုပ်မှုလက်ခံသည်. ဒါဟာအဓိကအားဖြင့်မာလ်တီမီဒီယာပစ္စည်းကိရိယာများအသုံးပြုသည်. DHL နေဖြင့်ဖြန့်ဝေဖော်ပြ, ယူပီအက်စ်, Fedex, TNT သို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမဆိုသတ်မှတ်ထားတဲ့လမ်း, ပင်ပင်လယ်နားမှာက. ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်ကျယ်ပြန့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များကအသိအမှတ်ပြုထားပါသည်, မည်သည့်လိုအပ်ချက်များကိုပါလျှင်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ.
ရှေ့ပြေးပုံစံ PCB 4Layers PCB TG170 အမြင့် TG 0.8MM PCB ထည် PCB Copy ကူး PCB အတိုင်ပင်ခံအီလက်ထရောနစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ